Talata 13 Jolay 2021
Fanadihadihana famolavolana ny andro
Resadresaka nifanaovana tamin'ireo mpamorona malaza eran-tany.
Alahady 11 Jolay 2021
Vakio ny dinidinika sy famelabelarana farany momba ny famolavolana, famoronana ary fanavaozana eo amin'ny mpanao gazety famolavolana sy ny mpanaingo endrika, mpanakanto ary mpikaroka malaza eran'izao tontolo izao. Jereo ireo tetik'asa famolavolana farany sy famolavolana loka azon'ireo mpanaingo endrika, mpanakanto, mpikaroka ary mpanova. Mahita fomba fijery vaovao momba ny fahaiza-mamorona, fanavaozana, zavakanto, famolavolana ary maritrano. Mianara momba ny dingam-pandrafetana endrika noforonina lehibe.